Buraannews.com » Howlgal Dad lagu soo Qabqabtay oo ka dhacay Gaalkacyo
Dad Kudhintay Deegaano Katirsan Hiiraan Ra’iisul Wasaaraha oo kulan la yeeshay safiirka Soomaaliya u qaabilsan Midowga Africa Dhageyso: Wasaaradda beeraha Puntland oo ka digtay isticmaalka sunta beeraha iyo 9 faras oo suntaas ugu baqtiyay dooxada Nugaal. Madaxweyne Axmed Siilaanyo oo la sheegay inuu Cafis U Fidiyey Dadkii Lagu Xukumay Weerarkii Lagu Qaaday Xeradii Ciidanka Ee Bariga Hargeysa Madaxweynaha Somaliland Oo Xafiiskiisa Ku Qaabilay Wakiilka Midawga Yurub U Qabilsan Somaliland Iyo Somalia, Iyo Waxyaabihii Ay Ka Wada Hadleen SOMALI LINKS
September 18, 2012 - Written by reporter2 - Edited byreporter2 Wararka aynu ka heleyno Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa sheegay in ay Ciidanka Ammaanka Maamulka Puntland ay halkaasi ka sameeyeen Howlgallo Baaritaanno ah kaasi oo ay ku soo qab qabteen Dad ay kaga Shakiyeen in ay amni darro ka wadeen Magaalada.
Ciidanka sida Qaaska ah u taba baran ee Puntland ayaa halkaasi Howlgal balaaran ay ka sameeyeen waxaana ay kuso qab qabteen Dad ay sheegeen ay sameyn lahaayeen Falal Amni Xumo ah balse ay ka Hortageen .
Ciidanka ayaa ula Dhaqaaqayay Qofkii ay is Yiraahdaan waxaa uu liddi ku yahay Ammaanka Magaalada dhanka Saldhigga Magaaladaasi .
Sidoo kale Ciidanka Ammaaanka ayaa Xiliyada Habeenkii ah siweyn loodareemaa Howlgaladooda iyadoo aad arki karto gaadiidkooda dagaal oo dhex maraya waddooyinka waaweyn ee magaalada
“Waxay ciidamadu xiraan wadooyinka iyagoo roondeynaya waxaana ay ugaarsadaan gaadiidka leh bacaha madow ee looyaqaan Bensolka iyagoona islagoobta ugaga fiiqa” waxaa sidaasi yiri goobjooge ku sugan bartamaha maagalada gaalkacyo oo diiday in magaciiisa lasoo xigto.
Saraakiil u hadashay Maamulka Puntland ayaa waxa ay Sheegeen in howlgaladaani ay sii socon doonaan laguna Xaqiijinayo Ammaanka Magaalaada Gaalkacyo iyo Guud ahaan Maamulka Puntland Goobaha ay ka arimiso .